Nolito Ayeeyadiis; “Wax kasta oo ay gabadhayda ka sheegtay Nolito waa been” – Gool FM
Nolito Ayeeyadiis; “Wax kasta oo ay gabadhayda ka sheegtay Nolito waa been”
Haaruun November 13, 2016
(Madrid), 13 Nof 2016 –Ayeeyada ciyaaryahanka Khadka dhexe ee Spain iyo kooxda Manchester City Nolito ayaa difaacday wiilkeeda iyadoo sheegtay in Gabadheeda ama Hooyadiis wax walba oo ay ka sheegtay inankeeda ay tahay mid been abuur ah.
Nolito hooyadiis Rocio Agudoayaa video ay soo dhigtay Youtube-ka waxa ay ku cambaareysay wiilkeeda oo ay ku tilmaantay mid dayacay oo aan haba yaraatee wax gacan ah siinin iyadoo siday sheegtay ku nool nolol aad u hooseysa mararka qaarna meelaha ka dawarsato.
Ayeeyo Dolores ayaa soo korisay Nolito kaddib markii gabadheeda xabsiga loo taxaabay maadaama ay isticmaali jirtay Daroogada.
“Wax walba oo gabadheydu ka sheegtay wiilkeeda Nolito waa been” waxaa sidaa El Mundo u sheegtay Nolito Ayeeyadiis.
“Sida ay ugu been abuuranayso waa mid aad u qallafsan, ma garan karo sida Hooyo ay sidaa u yeelayso dhiigeedii ay dhashay, Nolito waa wiil baari ah oo saaxiib dhab ah la ah saaxiibadiis, mar walbana wuu caawiyaa hooyadiis iyo walaalihiisa kale, laakiin dhibka ayaa wuxuu yahay in mar walba ay lacag weydiiso” ayay Ayeeyadu ku difaacday wiilkeeda ay soo korisay ee Nolito.
Mkhitaryan "Kuma dooran Manchester United Mushaarka oo keliya"
Antoine Griezmann oo laga saaray kulanka uu Faransiiska ciyaarayo Talaadada, lamana buuxin doono booskiisa